Semalt: Nzira Yokudzivirira Sei Maokie Mupivhipi Wose Usingadi Zvaunoda Sites
Mazhinji mawebsite anoshandisa makiki kuti awedzere mabasa avo ekuongorora. Mune zvimwe zviitiko, makiki anobatsira munhu kutsvaga kuti ave nehutano hwakanaka hwetaneti. Semuenzaniso, webhusaiti yebhadharo inoshandisa makiki kuchengetedza vashandi vavo kurwisana nemhosva dzekunyora vanobvisa mapepa - hosting asp.net sql server mexico. Sezvo makiki anoita seanoita kuti ruzivo rwekutsvaga ruve rwakanaka, pane zvimwe zviitiko apo iwe unoda kubvisa makiki kubva mu browser yako.
Munyaya ino SEO, Jack Miller, nyanzvi inotungamirira Semalt , achakudzidzisa maitiro ekuvhara makiki mu browser yako. Iwe uchazozivawo kuti ungabvisa sei mawebsite maunoda kuva nekiki inoshanda.
Nei uchida kubvisa makiki
Cookie iri faira (zvishoma) iyo webhusaiti inoisa pane kombiyuta yako kuti uwedzere ruzivo rwako rwekutsvaga. Iyi faira inochengetedza ruzivo pamusoro pekushandura ino uye inokubatsira mune zvaunoshandisa zvakare. Semuenzaniso, nzvimbo dzinogona kuchengetedza ruzivo pano sezvinhu zvako mumotokari, masangano ekutsvaga, nekufambisa tsika. Mafaira aya anononoka uye anoramba achivandudza ruzivo rwavo. Saizvozvowo, vanotambudza vane utsinye vanogona kushandisa chinhu ichi kuti vaite zvimwe zvekurwisa kwavo. Somuenzaniso, vanhu vakave nematambudziko evashambadzi vachicherechedza kushandiswa kwepawebsite yavo pasina ruzivo rwavo. Mune zvimwe zviitiko, vanhu vangave vachida kugadzirisa mashoko avo vatatu vangave vachida kuunganidza pamusoro pavo mune izvi nemimwe mienzaniso yakawanda, kudzidza kudzivirira makiki kunogona kukosha kuchinja mafungiro ako ekuongorora.
Muchirevo ichi, tichashandisa mamwe mavheji evhidhiyo kuti tiratidze izvi. Tsvakurudzo idzi dzinosanganisira Firefox, Chrome uye Internet Explorer. Muzviitiko izvi zvose, kune nzira dzekuzvarwa dzekugamuchira nekudzivirira makiki..Zvakakosha kuziva kuti nzira iyi inogona kushandiswa kune dzimwe mhandara. Misiyano chete inogona kunge iri nzira inoshandiswa pakugadzirisa zvirongwa. Iwe haufaniri kufunganya nezvehutachiona hwehutano hwaunoshandisa.
Muchibvumirano ichi, zvinobvira kudzora kuki kumawebsite atinoshanyira. Kuti udzike maokie, chengetedza zvirongwa (Gear) icon. Iwe unokwanisa kubva ipapo kuenda kumashanduro]> Internet Options> Privacy> Sites. Kubva pano, iwe unokwanisa kuisa yemavhidhiyo yemavhidhiyo yemuga wega. Dzvanya mberi uye chengetedza bhatani rinokurumidza kana iwe usingadi kuwedzera kuwedzera nzvimbo idzi.
Pano pane mamwe masimba ekudzora zvinhu zvakadai sekiki. Endai kune zvingasarudzwa ipapo. Pamusoro pevamwe, menyu inodonha pasi. Dzvanya kubvuma kana kusabvumira kuki kuumba mawebsite pano. Iwe unogonawo kugadzirisa tsika yekuti cookie maitiro pane browser yako Firefox.
MuChrome, unogona kuenda kuzvigadziro uye zvadaro chengeta zvakasarudzwa. Mutsamba rakapetwa, unogona kudhonza zviri mukati maitiro uye enda ku "cookies" chikamu. Kungofanana nedzimwe nyanzvi, unogona kudzora makoki ako kubva muchikamu chino.
Kudzora kuki kune zvimwe. Semuenzaniso, nhare dzekutsvaga dzisingagoni kukupa matanho akakodzera. Mune zvimwe zviitiko, unogumbura mapups uye mapikicha anosangana pakati pemapeji. Zvakakosha kutarisana neI IT nyanzvi kana iwe usingazivi zvauri kuita. Pane zviitiko apo vanhu vakave nemari yavo yeApaPal mari vakabatsirwa nekuda kwekuchinjwa kwekiki.